Belkin wuxuu ku dhiiradaa Dock loogu talagalay Apple Watch iyo iPhone | Wararka IPhone
Sugaya soo socota Sebtember 7 Aan aragno dhammaan wararka ku saabsan waxa uu noqon doono aaladda soo socota ee weyn ee Apple, iPhone 7, shaqada horumariyeyaasha iyo hal abuureyaasha qalabku waxay ku sii socdaan socdaalka Tanina waa wax naga dhigi kara inaan aragno waxa aaladaha xiga ee shirkaddu noqon karaan, Apple waxay u gudbisaa astaamaha xiga shirkadaha qalabka leh waana kuwan kuwa wax ka beddelaya qalabkooda qalabkan cusub.
Oo waxaan ka hadleynaa tan sababtoo ah nooca Belkin ayaa hadda bilaabay qalab cusub oo loogu talagalay qalabkeena. Doon cusub ayaa loo sameeyay si aan awoodno lacag ka qaad iPhone-keena iyo kan Apple Watch-ka isku mar, iyo maya, ma jiro isbadal la taaban karo oo ka muuqda isku xidhka danabka. Sidaan dhahno, Belkin ayaa hada bilaabay wax cusub Awoodda Korantada si aan iskaga wada qaadi karno iphone-keena iyo Apple Watch. Boodka ka dib waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta ...
Sida aad aragto waxaan wajahaynaa a deked qurux badan oo midab leh. Apple Watch ayaa ka soo bixi doonta saldhigga laftiisa iyo saldhiga laftiisa waxaa ku jira xeedho u gaar ah, si aad u badbaadin karto inaad ku sii dallacdo xeedho 2 mitir ah oo ah Apple Watch. Tan oo dhanna waxaa loogu talagalay $ 99.99, Qiime si cadaalad ah u tartamaya haddii aan tixgelinno in dekedda ugu horreysa, oo leh astaamo isku mid ah, in nooca Belkin la bilaabay uu ahaa qiyaastii $ 129, sidaas darteed waxaa jira isbadal qiimo leh.
IPhone 7 ayaa la filayaa inuu yeesho naqshad lamid ah ta iPhone 6s isla markaana dekeddan ayaa xaqiijinaysa, Belkin waa sumad la aqoonsan yahay oo xiriir la leh Cupertino dhexdeeda waana wax aad u naxdin leh haddii dhowr maalmood ka dib markii la bilaabay iPhone 7 ay bilaabeen deked ay sifooyinkeedu u dhigmin aaladda cusub ee Apple. Ma jiri doonaa Apple Watch cusub? Waxaa jira warar badan oo ku saabsan, haddii Apple ay go'aansato inay soo saarto Apple Watch cusub, qaabeynta iyo habka lacag bixinta waxay la mid noqon doontaa tan hadda jirta ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Belkin wuxuu ku dhiiradaa Dock loogu talagalay Apple Watch iyo iPhone
Waxay igu dhibaysaa in docks-ku aysan fursad u helin in saacadda tufaaxa si qotodheer loo dhigo si looga faa'iideysto habka habeenka
OnLeaks waxay daabacdaa sawir xaqiijinaya jiritaanka 7GB iPhone 256 Plus